By Htet Wai Aung - March 31, 2019
"သူတို့တွေ လူတွေကို မလှည့်စားသင့်ဘူး။ သူတို့ အနာဂါတ်ကို မလှည့်စားသင့်ဘူး" လို့ Mr. Suantak က ပြောနေသည်။ "သူတို့တွေ အခုလောလောဆည်တော့ အရမ်း လူသိများနေမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် နောက် လေး၊ ငါးနှစ်နေလို့ လူတွေအားလုံး ဒါကိုသိသွားရင်၊ လူတွေ အရမ်း စိတ်ဆိုးကြလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ ထိန်းနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။" ဟု သူက ဆက်ပြောတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် "မြို့" ဟူသော စကားလုံးမှာ အက္ခရာအစိတ်အပိုင်း ၅ လုံးဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ အခြေခံ ဗျည်း "မ" အား "ြ" ရရစ်ပေါင်းပြီး "ရ" သံ ထည့်ကာ "မြ" အသံထွက်၊ "ိ" လုံးကြီးတင်နှင့် "ု" တစ်ချောင်းငင် ပေါင်းစပ်ပြီး သရသံကို ပြောင်းလဲကာ "မြို" အသံထွက်ကာ နောက်ဆုံး "့ " အောက်မြင့် ပေါင်းပြီး အသံဖြတ်ကာ စာလုံးတစ်လုံး ဖြစ်လာပါသည်။ သိမ်းဆည်းရန် (Encoding) အက္ခရာအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုချင်းစီအတွက် ကွန်ပျူတာက နားလည်သော ဂဏန်း code point တစ်ခုစီ သတ်မှတ်ပေးရပါမည်။
ထပ်ဆောင်းပြောရလျှင် အက္ခရာ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုချင်းစီသည် အခြား အက္ခရာ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုကို လိုက်ပြီး ပုံစံ ပြောင်းလဲ (render) ရပါသည်။ ဒီဥပမာတွင် "ြ" ရရစ်သည် ခေါင်းပိုင်းမှာ လုံးကြီးတင်ကို ဖုံးမသွားစေရန်အတွက် ဖြတ်တောက်ထားရပါမည်။ "့ " မှာ တစ်ချောင်းငင်နေရာရှိစေရန်အတွက် ညာဘက်အနည်းငယ် ရောက်ရှိနေရပါမည်။ ဒီလို ကိစ္စတွေအတွက် ယူနီကုဒ်သည် အထူး ပုံပြောင်းစနစ်(Intelligent Rendering Engine) တစ်ခုကို အသုံးပြုပြီး "မြိ ု့" အက္ခရာအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဂဏန်း code point တစ်ခုစီမျှသာ ပေးကာ ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ အက္ခရာပေါင်းစပ်မှုပေါ်တွင် မူတည်ပြီး အက္ခရာ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုချင်းစီ၏ ပုံစံကို ပုံပြောင်းစနစ်က ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
ကနဦး အစတွင် Intelligent Rendering Engine ပုံပြောင်းစနစ် မရှိသည့်အတွက် ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်တွေပေါ်မှာ မြန်မာ အက္ခရာအမျိုးမျိုးကို ပေါ်စေဖို့ ခက်ခဲခဲ့ပါသည်။ အစောဆုံး မြန်မာဖောင့်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်သည့် မြစေတီဖောင့်ကို ရေးသားသော ကိုငွေထွန်း၏ စိတ်ကူးတစ်ခု ဆန်းသစ်ခဲ့မှုသည် ယနေ့အထိ ဇော်ဂျီဖောင့်မှ သုံးစွဲနေဆဲ ဖြစ်သည်။ သူက အက္ခရာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီ၏ ပုံစံကွဲ အမျိုးမျိုးတို့ကို ဂဏန်း code point တစ်ခုချင်းစီမှာ တွဲဆက် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ဥပမာ "မြို့" ကို ရေးသားရန်အတွက် မြစေတီကို အသုံးပြုသူတို့သည် ရရစ် ပုံစံကွဲ ၈ မျိုးထဲမှ သင့်တော်သော ရရစ်နှင့် အောက်မြင့် ကို ရွေးချယ် ရိုက်နှိပ်ရပါသည်။
ဇော်ဂျီတွင် "မြို့" ဟူသော စကားလုံး တစ်လုံးအတွက် အမြင်မှန်သည်ဟု ယူဆနိုင်သော ရေးသားမှု ၆မျိုး ရှိပါသည်။ အကယ်၍ မှားယွင်းသော ရရစ်ပုံပြောင်းများကိုပါ လက်ခံပါက ထပ်ပြီး ကွဲပြားမှု များစွာ ရှိနေနိုင်ပါသေးသည်။ သို့ပါသော်လည်း ကွန်ပျူတာ တစ်ခုသည် ကျွန်တော်တို့ အမြင်အားဖြင့် မှန်နေသော မူကွဲ မျိုးမျိုးကို မတူညီသော စကားလုံး အဖြစ်သာ မှတ်ယူပါသည်။ နှိုင်းယှဉ်ရလျှင် ယူနီကုဒ်သည် အက္ခရာတစ်ခုချင်းစီအတွက် ကုဒ်ပွိုင့် (code point) တစ်ခုစီကိုသာ ရှိပြီး မှန်ကန်သော အစီအစဉ်ဖြင့် သိမ်းဆည်းမှသာ စကားလုံးပုံစံ မှန်ကန်စွာ ပုံဖော်(render) လုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ ယူနီကုဒ်တွင် စကားလုံးတစ်ခုချင်းစီအတွက် သိမ်းဆည်းမှု တစ်ခုစီဖြစ်ပါသည်။
"ဒါဟာ လတ်တလော ဖြေရှင်းခြင်းမျှသာ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Microsoft နှင့် အခြားနည်းပညာ ကုမ္ပဏီတွေဟာ စံစနစ်တစ်ခုကို ထောက်ပံ့ပေးကြမှာလေ" ဟု ကိုငွေထွန်းက ပြောပါသည်။ "စံစနစ် ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုသူတွေကို အရင်လုပ်ခဲ့တာတွေကို ဆက်လက် ထောက်ပံ့မှု မပေးတော့ဆိုတာ ပြောခဲ့ပါတယ်" ဟု သူက ဆိုပါသည်။
"ဇော်ဂျီ၏ ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှု အကြောင်းက planet.com.mm ပဲ" ဟု ကိုရာဝိက ပြောကြာခဲ့ပါသည်။ "planet က သတင်းတွေ စုတဲ့ နေရာ တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပြီး သူက ဇော်ဂျီကို အသုံးပြုတယ်။ လူတွေက အဲဒီဆိုဒ်ကို သွားတဲ့အခါ ဖောင့်ကို Download လုပ်ဖို့ link တစ်ခု ရှိတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက font embedding က အလုပ်မလုပ်သေးတော့ ဖောင့် install လုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လေ" ဟု သူက ဆက်ပြောခဲ့ပါသည်။
"တတိယ တစ်ချက်က ဘလော့တွေပဲ။ အစောပိုင်း ဘလော့ဂါတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ညီလင်းဆက်က ဇော်ဂျီကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး ဘလော့တွေမှာ ဇော်ဂျီအသုံးပြုနည်းတွေကို ရေးသားခဲ့တယ်။ လူတွေက ဒါကို သဘောကျကြတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ ဇော်ဂျီနဲ့ ဘလော့တွေ ရေးဖို့ စခဲ့ကြတာပဲ" ဟု ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
"ဒါတွေသာ ကံကောင်းထောက်မစွာ ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးထားပါတော့။ အဲလိုသာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုနေရာမှာ မဟုတ်တော့ဘူး" ဟု ကိုရာဝိက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
"လာမယ့် အနာဂါတ်မှာ စက်ဘာသာပြန်စနစ်(Machine Translation)၊ ရုပ်ပုံမှ စာအက္ခရာတွေကို ပြောင်းလဲမှု (OCR)၊ စာအက္ခရာမှ အသံထွက်ဆိုနိုင်မှု (Text to voice)တို့တွေ ရှိလာမယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဇော်ဂျီဖြင့် ရေးထားတဲ့ အချက်အလက် content တွေဟာ အသုံး မဝင် ဖြစ်လာမှာ"
Mr. Suantak က အဲဒီအချိန်ရောက်ရင် ရှိနေတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ စွန့်ပစ်ရမည့် အနေအထားတွေ ရှိလာနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်နေပါသည်။ လက်ရှိ သတင်းအချက်အလက် content တွေကို ယူနီကုဒ်စနစ်ကို ပြောင်းလဲဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်း အသိအမှတ် ပြုခဲ့ပါသည်။ "BBC က ယူနီကုဒ်စနစ်ကို လိုက်နာတဲ့ ဖောင့်ကို သုံးတယ်။ လူတွေ BBC ကို ကြည့်နေကြတုန်းပဲ။ သူတို့ပေးနိုင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေက လုံလုံလောက်လောက် ကောင်းနေခဲ့ရင် လူတွေဟာ ဒီအချက်အလက်တွေကို ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ ပြောင်းလဲလာမှာပဲ"။
"ကမ္ဘောဒီယားမှာလည်း ဒီပြဿနာမျိုး ကြုံခဲ့တယ်။ အစိုးရက ရှေ့ဆောင်လမ်းပြပြီး 'ဒီနိုင်ငံကို ပစ္စည်းတွေ တင်သွင်း ရောင်းချမယ်ဆိုရင် ယူနီကုဒ်ကို သုံးရမယ်' လို့ ကြေညာခဲ့တယ်။ အဲဒီ ပြဿနာ ပြေလည်သွားခဲ့တယ်"လို့ ကိုသူရလှိုင်က ပြောပါသည်။
Sine Thura June 24, 2019 at 12:33 PM
Nice. Great. I appreciate.